Noocyada dhunkashada: astaamaha, isticmaalka iyo ujeedooyinka | Ragga Stylish
Hal dariiqo oo loogu muujiyo dareen, kalgacal ama jacayl qof kale waa in la siiyo oo la helo dhunkasho. Waa mid ka mid ah dareenkaas oo ku siin kara goosebumps. Gaar ahaan haddii dhunkashadaas uu ku siiyo qofka aad rabto inaad la joogto. Waa ficil caalami ah oo u adeegaya muujinta jacaylka iyo kalgacalka. Si kastaba ha noqotee, way ka duwan yihiin noocyada dhunkashada mid walbana wuxuu leeyahay ujeedkiisa iyo xoogiisa. Waxaad siin kartaa dhunkasho fudud oo aad ku salaami karto sida inaad siiso mid aad u qoto dheer.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa maxay yihiin noocyada kala duwan ee dhunkashada iyadoo loo eegayo xooggooda, ujeeddadooda iyo habka loo bixiyo.
1 Noocyada dhunkashada iyo isticmaalka
2 Noocyada dhunkashada iyo kala soocidda
2.1 Eskimo dhunkasho
2.3 Dhunkasho dhabanka
2.4 Noocyada dhunkashada: gacanta
2.5 Dhunkashada beerka
2.6 Dhegta ayaan ka dhunkadaa
2.7 Noocyada dhunkashada: qoorta
2.8 Dhunkashada hawada
Noocyada dhunkashada iyo isticmaalka
Dhunkashadu macnaheedu waa wax aad u badan, waxayna kuxirantahay daqiiqadda uu qofka siinayo. Waxay noqon kartaa khibrad qaali ah oo gaar ah illaa iyo inta ay jiraan dareenno ku lug leh. Iyaga ayaa mahad leh waxaan la xiriiri karnaa qof kale marar badanna waxay soo bandhigaan dareeno qoto dheer taas noo oggolow inaan si qoto dheer iyo si dhow isugu xirno. Abwaannada qaarkood xitaa waxay caddeeyaan in dhunkashadu tahay muujinta nafta.
Dhamaanteen waan wada dhunkannay oo waa nala dhunkaday hal waqti ama mid kale. Khabiirada cilmu-nafsiga waxay isku dayayeen inay helaan waxtar iyo in waxa qof kale dhunkado ay ku saleysan tahay hidaha. Taasi waa, bina-aadamku waa ku-talo-galay. Dhunkashada ayaa leh shaqo aasaasi ah si loo sii wado noolaha aadanaha. Waxay kaloo naga caawineysaa inaan u noolaano sababo kala duwan sida sameynta xiriiro lala yeesho shaqsiyaadka kale. Waan ognahay in bini aadamku yahay qof dabiici ah oo kaligiis noolaan karin.
Noocyada dhunkashada iyo kala soocidda
Waxaan eegi doonaa maxay yihiin noocyada dhunkashada ee kaladuwan, maxay yihiin macnahoodu iyo macnaha guud ee la siinayo.
Waa midda aan dadku taaban bushimahooda. Waxay ku sameeyaan midba midka kale sankiisa. Asalka dhunkashadani waxay dhacday maxaa yeelay Eskimos-ku waxay ku nool yihiin aag aad loo jecel yahay waana ay cararaan halista in baraf lagu xidho haddii candhuufta mid kale taabta. Sababtaas awgeed, waxay u dhowaadaan oo ay siiyaan isgoyska sankooda. Waxay noqon kartaa mid xanuun badan waxaadna isku dayeysaa inaad kala tagto, sidaa darteed waxay u isticmaalaan dhunkashada Eskimo inay ku muujiyaan kalgacal. Kuwan Eskimos sidoo kale waxay uriyaan dhabanadooda.
Dhunkashada Faransiiska ee ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan noocyada kala duwan ee dhunkashada maaddaama ay la xiriirto jacayl iyo xamaasad. Waxaa loogu yeedhi karaa dhunkashadaas oo ay afafku ku fal galaan. Waxaa sidoo kale loo yaqaan dhunkashada carrabka. Waa nooc nooc kasta oo xiriir ah. Markuu qofku u dareemo mid kale waa dareen xoog leh dhunkashaduna waa muujinta ugu wanaagsan ee jacayl ee uu mid kale u dareemayo.
Waa nooc macno badan yeelan kara. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu salaamo. Waxaa jira xoogaa faraqyo dhaqameed ah noocan dhunkashada. Tusaale ahaan, Isbaanishka marka ay laba qof is salaamaan, inta badan waxay dhunkadaan dhaban kasta. Si kastaba ha noqotee, Holland halkii labo laga ahaan lahaa, seddex dhunkasho ayaa la siiyaa. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay noqon kartaa dhunkasho dhaqameed kasta waxaana loo isticmaalaa oo kaliya in la yiraahdo hello
Waxa kale oo jiri kara kuwo kale oo dhabanka ku jira oo macno yar u dhexeeya labada qof ee is jecel ee raba inay sidan ugu gudbiyaan kalgacal. Laakiin waxa ugu caansan waa in haddii si kale loo sameeyo, ay tahay dhunkasho inaad salaantid.
Noocyada dhunkashada: gacanta
Waa hab lagu muujiyo xushmad iyo qadarin. Waa mid loo adeegsado jawi rasmi ah oo runtii macnihiisu leeyahay xarrago, waxbarasho iyo xushmad badan. Waxaa si ballaaran loo isticmaalay taariikh ahaan Kulaylka shaneemada si loogu duufsado dumarka shaashada weyn. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ficil naxariis leh oo aad qofka kale ku tusayso inaad iyaga la joogto.
Waa heerka ugu sarreeya ee loo adeegsan doono bushimaha labada qof ee is taabta. Luuqadaha isma dhex galaan. Waxay noqon kartaa sarre saaxiibtinimo ama sarre oo badanaa loo maleeyo inay tahay bilowga dhunkashada Faransiiska. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa loola jeedaa in labada qof ay rabaan in yar yar la aado laakiin waa astaan ​​muuqata oo soo jiidasho jireed ah.
Dhegta ayaan ka dhunkadaa
Waa mid ka mid ah kuwa inta badan kiciya aagagga dareenka jirka ee qofka kale. Dhegta waxaa loo adeegsadaa sida loo ciyaaro marka ujeedadu tahay in la yeesho cilaaqaad dhow. Waa mid ka mid ah miisaanka ugu xiisaha badan ee intimates waxayna qaadataa wax yar oo kalsooni ah in la sameeyo.
Noocyada dhunkashada: qoorta
Sida dhagta oo kale, waa aag ujeeddadiisa ugu weyni tahay kacsiga galmada. Waa mid leh faa'iidooyin badan oo loo yaqaan 'aphrodisiac' taas oo qofka kale ka dhigaysa inuu isu diyaariyo cilaaqaad dhow. Marka hammuhu aad u xoog badan yahay wuu dhammaan karaa nooc ah hickey oo ah calaamadda guduudan ee ku haysa qoorta dhunkashada kadib.
Waa midka ay weheliso gacanta oo xitaa labadaba si xun ayaad u isticmaali kartaa. Waxa kale oo aad iska dhigi kartaa inaad dhunkashada gacanta ku qaadatid oo aad masaafada fog ku afuufo. Tani waxay muujineysaa in qofka wasakheysan yahay inkasta oo masaafada aysan u saamixin inuu ku siiyo dhunkasho jireed, isku day ayaa la sameeyay si looga dhaadhiciyo xooga dareenka meel fog. Waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta oo qof ah, ama dhanka saaxiibtinimada, in la muujiyo kalgacal ama dadka is jecel ee aan is arki doonin in muddo ah.
Sidaad u aragto, waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo muujiyo jacaylka qofka mana aha inuu ahaado jacaylka kuwa jecel, laakiin kalgacalka iyo qadarinta badanaa laga dhex abuuro dadka si fiican isugu xira. Si fiican u dooro dhunkashada aad siin doontid si aanad u keenin dhibaato ama is faham la'aan. Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto noocyada kala duwan ee dhunkashada ee jira iyo maxay yihiin astaamaha iyo adeegsiga la siiyo mid kasta oo kamid ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Noocyada dhunkashada